सफल घिमिरेका लेखहरु :
एसपीपीले विनिर्माण गरेका पात्रहरू
अठार हजार त प्रहरी निकाय मात्रै भएको अमेरिकी सुरक्षा संरचना आफैंमा जटिल छ । त्यहाँको नेसनल गार्ड ब्युरो ५४ वटा प्रादेशिक तथा क्षेत्रीय जगेडा फौज मिलेर बनेको छ । उसैसँग जोडिएको भनिएको नेपालको सम्बन्धले अहिले हाम्रो राजनीतिक वायुमण्डल तताएको छ ।
हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा के हो ?
जनतालाई तात्कालिक खतरा ससाना मूर्त कुराबाट छन् । सुरक्षा नीति–निर्माता भने जहिल्यै अमूर्त खतराको पछि लागिरहेका छन् । जनताको जीवन र राज्यको अस्तित्वमाथि खतरा केबाट छ भन्ने विश्लेषण लोकप्रियतावादी राजनीति र अनुमानका आधारमा गर्न छोड्नुपर्छ ।
युद्धको भुङ्ग्रोमा १० खर्ब डलर
तालिबान आततायीहरूलाई हराउन भनी अमेरिकी नेतृत्वको सेना अफगानिस्तान छिरेको २० वर्ष पुग्यो । युद्धरत पक्षबीच गत वर्ष शान्ति सम्झौता पनि भयो । अब केही हप्ताभित्रै अमेरिकाले आफ्ना अधिकांश सेना फिर्ता लगिसक्ने बताएको छ । तर अफगानिस्तानमा हिंसाको राप घटेको छैन । विद्रोही समूहको शक्ति बढ्दै छ ।
सेनामाथि संसदीय निगरानीको गुणस्तर
नेपाली सेनाले एउटा हातमा बन्दुक र अर्कामा खन्ती बोकी काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग बनाउँदै छ । यसमा ठूलै आर्थिक मामिला मिसिएको जगजाहेर छ । त्यसैले अपेक्षित रूपमा यसप्रति राज्यका अन्य निकायको पनि नेत्राकर्षण भएको छ । परिणामतः सेनाका अन्य ठूला गैरप्रतिरक्षा परियोजनाजस्तै द्रुतमार्ग पनि किचलोरहित नरहने संकेत प्रशस्त छ ।
फोहोरमा भेटिएको त्यो ‘अत्तर’
क्युबाका राष्ट्रपति फिडेल क्यास्त्रोको हत्या गर्न उनको जीवनभर ६३४ प्रयास भएको त्यहाँको जासुसी निकायको दाबी छ । आफूले त्यस्तो प्रयास आठपटक गरेको अमेरिकाले नै स्विकारेको छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका खरो आलोचक तथा विपक्षी नेता अलेक्सेई नाभाल्नीलाई गएको वर्ष चियामा विषालु रेडियोधर्मी पदार्थ मिसाएर हत्या गर्ने प्रयास गरियो । उपचारका लागि जर्मनीमा शरण लिएका उनी अघिल्लो महिना घर फर्किंदै गर्दा मस्कोमा विमानस्थलमै पक्राउ परे ।
विवेकमाथि भ्रमको विजय ?
साक्षर हुनु र राजनीतिक रूपले साक्षर हुनुमा आकाश–पातालको भिन्नता छ । जस्तै, अमेरिकाको साक्षरता दर ९९ प्रतिशत छ तर त्यहाँ संसार सारा षड्यन्त्रले छोपेको छ भनी अन्धविश्वास गर्ने समूहको आकार अचम्म तरिकाले बढ्दै छ । लाखौं मानिस क्युएनन भन्ने समूहमा होमिएका छन् ।
कोरोना महामारीले नछोएका भूगोल अब सीमित रहे, तर हामी नेपाली अझै आँधी आउनुअघिको शून्यतामा छौं । सानो जीवाणुले महाप्रलय निम्त्याउँदा विश्वभर ४ लाख ८० हजारजति संक्रमित भइसके । करिब २१ हजार ६ सय जनाको ज्यान गइसक्यो ।